माधवनारायणका बर्तालुले गरे पशुपतिनाथमा पूजाअराधना - नेपालबहस
माधवनारायणका बर्तालुले गरे पशुपतिनाथमा पूजाअराधना
| १४:५६:२१ मा प्रकाशित
२९ माघ, काठमाडौं । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि एक महिने माधवनारायण व्रत गरिरहेका बर्तालुले आज बिहान पशुपतिस्थित आर्यातीर्थमा स्नान गरी पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा पूजाआराधनासहित दर्शन गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष माघ कृष्ण औँशीका दिन बिहान पशुपतिस्थित आर्यघाटमा माधवनारायण बर्तालुले स्नान गर्ने व्रत विधि रहेको छ । माधवनारायण बर्तालु तीर्थयात्राका लागि माघकृष्ण चतुर्दशी अर्थात् बुधबार बेलुकी पशुपति क्षेत्र आएका थिए । माधवनारायण बर्तालुलाई राख्न पशुपति क्षेत्रमा प्राचीनकालदेखि नै भवनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भवनमा पराल ओछ्याएर बर्तालु सुत्छन् ।
स्नानपछि पशुपतिमा पूजा आराधना गरी जयवागेश्वरीसम्म जल चढाएका छन् । बर्तालुले जयवागेश्वरीबाट सानो गौचरण गएर दिउँसोको भोजन गर्ने परम्परा छ । माधवनारायण बर्तालुले एक महिनासम्म एक छाकमात्र भोजन गर्ने व्रत विधि छ । सानो गौचरणबाट नारायणहिटी हुँदै वसन्तपुरबाट नख्खु जेलको बाटो भएर दक्षिणकाली नगरपालिकाको शेषनारायण मन्दिरमा माघकृष्ण औँशीको राति आज बास बस्ने गरिन्छ ।
माघशुक्ल प्रतिपदाका दिन शेषनारायण मन्दिरमा माधवनारायणलाई राखेर पूजा आराधना गरिन्छ । पूजा आराधना सकेर पैदल आई वर्तालुले दिउँसोको भोजन शङ्खमूल क्षेत्रमा गर्छन् । माघशुक्ल प्रतिपदाको राति शङ्खमूलबाट पैदल यात्रा गरी साँखु गएर पूर्ववत् व्रत विधि गर्ने प्राचीन परम्परा छ ।
पशुपतिमा माधवनारायण बर्तालु आउने भएकाले माघकृष्ण चतुर्दशीको दिउँसोदेखि नै आर्यातीर्थसमेत भनिने आर्यघाटमा शव नजलाउने गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए । बिहीबार बर्तालुले पशुपति नछाडेसम्म आर्यघाटमा शव नजलाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
विगत वर्षमा करिब ४०० जनाले माधवनारायण व्रत गर्ने गरेकामा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण ४९ जनालाई मात्र स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर सुरक्षितसाथ राखिएको छ । महिला ३५ र पुरुष १४ गरी ४९ जना यसपटक व्रतमा सहभागी भई परम्परादेखि गरिँदै आएको माधवनारायण व्रतको संस्कृति संरक्षण गरिरहेको श्री माधवनारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी सुधार समितिका अध्यक्ष मीजेन्द्रकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
औँशीको बिहान आज पशुपतिमा पूजा आराधना एवं दर्शनपछि सानो गौचरणमा खाना खाएर वसन्तपुर हुँदै पैदलयात्रा दक्षिणकालीको शेषनारायण मन्दिरतिर बर्तालुलाई लैजान लागिएको पनि उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारी भए पनि शालीनदीमा विगत वर्षमा जस्तै दर्शनार्थीको भीड लाग्ने गरेको छ । कोरोनापछि सबै क्षेत्र खुला भइसकेकाले दर्शनार्थीबिना हिच्किचाहट शालीनदीमा आइरहेका छन् ।
माधवनारायण व्रत बसेका बर्तालु पनौतीमा २ हप्ता पहिले
आजदेखि एकमहिने माधवनारायण मेला शुरु, चिसो पानीमा डुबुल्की ! ४ हप्ता पहिले
शनिबार पशुपतिनाथलाई चिसोबाट जोगाउन धनुर्मास पूजा गरिने २ महिना पहिले
राष्ट्रपतिद्वारा बन्द पशुपतिनाथमा क्षमासहित विशेष पूजा २ महिना पहिले
आज बालाचतुर्दशी पर्व, पशुपतिमा महादीपदान नहुने ३ महिना पहिले
आगामी पुस १ गतेदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गरिने ३ महिना पहिले
नेकपा विभाजनः अध्यादेश ल्याउने कि संसदमै सामाना गर्ने ? ५३ मिनेट पहिले
आइपिओ नतिजा हेर्न सिडिएससीले ल्यायो नयाँ वेबसाइट ५६ मिनेट पहिले
नेकपाको कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा बनेको छैन : कोइराला १ घण्टा पहिले
देशभर ८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि १ घण्टा पहिले
कुटपिट गरी गर्भपतन गराएको आरोपमा तीन जना पक्राउ २ घण्टा पहिले
देशको राजनीतिमा नैतिकपतनको प्रश्न पेचीलो बन्नु चिन्ताको विषय : जबरा २ घण्टा पहिले
नेपाली राजनीतिमा धोकाधडी र षडयन्त्रको चलनः जसले ल्यायो उही सकियो ७ घण्टा पहिले
विप्लव समूहका ३ जना कार्यकर्ता सप्तरीबाट नियन्त्रणमा ७ घण्टा पहिले
ओली अरुको आलोचना सुन्न नसक्ने : प्रचण्ड ७ घण्टा पहिले
राष्ट्रपतिबाट जोशीको स्वास्थ्यलाभको कामना ८ घण्टा पहिले
किशोरी विवाह गरेको अभियोगमा बेहुला र बुबा पक्राउ ८ घण्टा पहिले
आँखा अस्पताल नजिकै युवक मृत फेला ८ घण्टा पहिले
पाँचथरका सबै गाउँपालिकामा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन ९ घण्टा पहिले
विद्यालयमा आगलागी हुँदा एक करोडको क्षति ९ घण्टा पहिले
शहर सफा र स्वच्छता बनाउन चासो ११ घण्टा पहिले
३० वर्षपछि झापामा पहिलो रबर उद्योग स्थापना ११ घण्टा पहिले
विवाद चुलिएपछि पत्रकार महासंघ युरोपको एकै दिन समानान्तर अधिवेशन ६ दिन पहिले
संसद विघटनले जटिलता निम्त्यायो, अब ताजा जनादेश : थापा ७ दिन पहिले
मातृभाषा दिवसमा जनजाति साहित्यकार महासङ्घ गठन ३ दिन पहिले
मेलम्ची सुरुङ सोमबार पुनः परीक्षण गरिने ६ दिन पहिले
मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा–बाग्लुङ खण्ड धमाधम कालोपत्र १ दिन पहिले
कामना सेवा बैंकको ऋणपत्र बाँडफाँड २ दिन पहिले
बतासे झरनामा पर्यटकको घुइचो ३ दिन पहिले
सिरियामा अमेरिकी हवाई कारबाहीमा परी इरान समर्थक १७ लडाकू मारिए १ दिन पहिले
निर्णाणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको आयोगद्धारा निरीक्षण २ हप्ता पहिले
सिंहदरबारको पुनःनिर्माण सम्पन्न, तीनवटा मोहडाको आज ओलीले उ्दघाटन गर्ने २ हप्ता पहिले
देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष अधिकारीद्वारा पदभार ग्रहण २ दिन पहिले
माटोको अभावमा सरस्वतीको मूर्ति बनाउने काम प्रभावित, सोचेजस्तो व्यापार नहुने २ हप्ता पहिले
प्रचण्डलाई आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश ३ हप्ता पहिले
अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नहटाउने ३ हप्ता पहिले
काठमाडौंमा सुरक्षा निकाय हाई–अलर्टमा ४ दिन पहिले
प्रभावकारी बन्दै जन्म र मृत्युमा चामल दिने कार्यक्रम १२ महिना पहिले
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भण्डारीद्धारा पहिरो पीडितलाई राहत वितरण ७ महिना पहिले
नागरिकता नहुँदा सेवा सुविधाबाट वञ्चित ४ महिना पहिले
यही हो राज्यको दायित्व, खाेई नागरिकको न्यूनतम अधिकार ? ६ महिना पहिले